အေမရိကန္က မုုဒိန္းမႈ မေျမာက္တဲ့ ဥပေဒ – Gentleman Magazine
ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပါတ္သတ္တဲ့ ဥပေဒ အသစ္ေတြကို ျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပါတ္သတ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမင္ေတြကို ေတာ္လွန္ပစ္မယ့္ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႔ဆိုရင္ မုဒိမ္းက်င့္ပါတယ္လို႔ လိမ္လည္စြဲဆိုလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။
ဒီဥပေဒမွာ မိန္းမက လက္ခံရင္ ” Yes ” ဆိုတာနဲ႔ ဆက္ဆံခြင့္႐ွိၿပီး ျပစ္မႈ မေျမာက္ပါဘူး။ ထူးဆန္းစြာပဲ အိမ္ေထာင္႐ွိ အမ်ိဳးသားေတြက ဒီဥပေဒကို သေဘာမက်ၾကပါဘူး။ သူတို႔ဇနီးသည္ မဆက္ဆံခ်င္မျခင္း သူတို႔ ဆက္ဆံလို႔ မရလို႔ပါ။
အဲဒီ ဥပေဒက ႐ွင္း႐ွင္းေလးပါပဲ။ သင္နဲ႔ ဆက္ဆံမယ့္ မိန္းမက သင့္ကို ကိုယ္နဲ႔ ျဖစ္ေစ ႏႈတ္နဲ႔ျဖစ္ေစ သင္နဲ႔ ဆက္ဆံခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါသလား။ လုပ္လိုက္ပါေတာ့။ တကယ္လို႔ မေျပာဘူးလို႔ သံသယ႐ွိရင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္တဲ့အျမင္ ဇနီးမယား ဆိုရင္လဲ သူတို႔ကို အေလးမထားရာ က်သြားမွာမို႔ပါ။
စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ သူမ ” Yes ” မေျပာမျခင္း ဘယ္ လိင္အဂၤါကိုမွ မထိသင့္ပါဘူး။ သင္ အတိအက်သိခ်င္ရင္ေတာ့ ဥပေဒက သူမ သင္နဲ႔ ဆက္ဆံခ်င္ေၾကာင္း လကၡဏာေတြကို ဒီလို ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။
၁. သင့္ရဲ႕ ပါတနာက သင္နဲ႔ ဆက္ဆံခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလာရင္
၂. သင္က သင့္ပါတနာကို သင္နဲ႔ ဆက္ဆံခ်င္လားလို႔ ေမးလိုက္လို႔ သူက ” Yes ” ေျဖရင္
၃. သင္ သင့္ပါတနာကို နမ္းလို႔ သူက ျပန္နမ္းရင္
၄. သင္က သူမတို႔ကို ထိေတြ႕တို႔ထိလိုက္လို႔ သူက သင့္ကုိ ျပန္ထိတို႔ရင္၊ သူမ စိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ လုပ္တာ ျဖသ္ၿပီး ဘာၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမွ ခံမထားရဘူးဆိုရင္
၅. သင့္ပါတနာက စိတ္ႂကြေစတဲ့ ညည္းသံေလးေတြ လုပ္ရင္
၆. သင့္ပါတနာက သင့္မ်က္လံုးေတြထဲကို ဂ႐ုစိုက္ၾကင္နာမႈ အျပည့္နဲ႔ ၾကည့္ရင္
၇. သင္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လို႔ သူမတို႔ကုိ သင္နဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖိအားေပးမႈ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ခဲ့ရင္
၈. ေဆးေတြ၊ အရက္ေတြနဲ႔ လူမွန္းမသိေအာင္ မူးမေနရင္
၉. သင္က ထိေတြ႕တဲ့အခါ သူမက ကိုယ္နဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္နဲ႔ ျဖစ္ေစ မ႐ုန္းကန္ရင္၊ သင့္ကို ေၾကာက္တဲ့ အၾကည့္နဲ႔ မၾကည့္ရင္၊ ေအာ္ဖို႔ မႀကိဳးစားရင္၊ မငိုရင္
ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရင္ သင့္ကို မုဒိမ္းမႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္လို႔ မရပါဘူး။ မွတ္စရာ ႐ွိတာက သူမက နမ္းရံုနဲ႔ သင္က ျပန္နမ္းလို႔ပဲ ရမွာပါ။ တျခားကိစၥေတြ မရပါဘူး။
သူမ သင်နဲ့ ဆက်ဆံချင်ပုံ ပြတဲ့ လက္ခဏာ ၉ ခု
ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ဥပဒေ အသစ်တွေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမြင်တွေကို တော်လှန်ပစ်မယ့် ဥပဒေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေနဲ့ဆိုရင် မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်လို့ လိမ်လည်စွဲဆိုလို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီဥပဒေမှာ မိန်းမက လက်ခံရင် ” Yes ” ဆိုတာနဲ့ ဆက်ဆံခွင့်ရှိပြီး ပြစ်မှု မမြောက်ပါဘူး။ ထူးဆန်းစွာပဲ အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသားတွေက ဒီဥပဒေကို သဘောမကျကြပါဘူး။ သူတို့ဇနီးသည် မဆက်ဆံချင်မခြင်း သူတို့ ဆက်ဆံလို့ မရလို့ပါ။
အဲဒီ ဥပဒေက ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ သင်နဲ့ ဆက်ဆံမယ့် မိန်းမက သင့်ကို ကိုယ်နဲ့ ဖြစ်စေ နှုတ်နဲ့ဖြစ်စေ သင်နဲ့ ဆက်ဆံချင်တယ်လို့ ပြောပါသလား။ လုပ်လိုက်ပါတော့။ တကယ်လို့ မပြောဘူးလို့ သံသယရှိရင် မလုပ်ပါနဲ့။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရာ ရောက်တဲ့အမြင် ဇနီးမယား ဆိုရင်လဲ သူတို့ကို အလေးမထားရာ ကျသွားမှာမို့ပါ။
စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဆိုရင်တော့ သူမ ” Yes ” မပြောမခြင်း ဘယ် လိင်အင်္ဂါကိုမှ မထိသင့်ပါဘူး။ သင် အတိအကျသိချင်ရင်တော့ ဥပဒေက သူမ သင်နဲ့ ဆက်ဆံချင်ကြောင်း လက္ခဏာတွေကို ဒီလို ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
၁. သင့်ရဲ့ ပါတနာက သင်နဲ့ ဆက်ဆံချင်တယ်လို့ ပြောလာရင်
၂. သင်က သင့်ပါတနာကို သင်နဲ့ ဆက်ဆံချင်လားလို့ မေးလိုက်လို့ သူက ” Yes ” ဖြေရင်
၃. သင် သင့်ပါတနာကို နမ်းလို့ သူက ပြန်နမ်းရင်
၄. သင်က သူမတို့ကို ထိတွေ့တို့ထိလိုက်လို့ သူက သင့်ကို ပြန်ထိတို့ရင်၊ သူမ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ လုပ်တာ ဖြသ်ပြီး ဘာခြိမ်းချောက်မှုမှ ခံမထားရဘူးဆိုရင်
၅. သင့်ပါတနာက စိတ်ကြွစေတဲ့ ညည်းသံလေးတွေ လုပ်ရင်
၆. သင့်ပါတနာက သင့်မျက်လုံးတွေထဲကို ဂရုစိုက်ကြင်နာမှု အပြည့်နဲ့ ကြည့်ရင်
၇. သင် ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ သူမတို့ကို သင်နဲ့ ဆက်ဆံဖို့ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဖိအားပေးမှု ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ရင်
၈. ဆေးတွေ၊ အရက်တွေနဲ့ လူမှန်းမသိအောင် မူးမနေရင်
၉. သင်က ထိတွေ့တဲ့အခါ သူမက ကိုယ်နဲ့ ဖြစ်စေ၊ နှုတ်နဲ့ ဖြစ်စေ မရုန်းကန်ရင်၊ သင့်ကို ကြောက်တဲ့ အကြည့်နဲ့ မကြည့်ရင်၊ အော်ဖို့ မကြိုးစားရင်၊ မငိုရင်
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီရင် သင့်ကို မုဒိမ်းမှုနဲ့ စွဲချက်တင်လို့ မရပါဘူး။ မှတ်စရာ ရှိတာက သူမက နမ်းရုံနဲ့ သင်က ပြန်နမ်းလို့ပဲ ရမှာပါ။ တခြားကိစ္စတွေ မရပါဘူး။
အမေရိကန်က မုဒိန်းမှု မမြောက်တဲ့ လက္ခဏာများ
သူမ သငျနဲ့ ဆကျဆံခငျြပုံ ပွတဲ့ လက်ခဏာ ၉ ခု
ကယျလီဖိုးနီးယား ပွညျနယျဟာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှုနဲ့ ပါတျသတျတဲ့ ဥပဒေ အသဈတှကေို ပွဋ်ဌာနျးလိုကျပါတယျ။ အဲဒါဟာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှုနဲ့ ပါတျသတျတဲ့ ကျွနျတော်တို့ အမွငျတှကေို တော်လှနျပဈမယ့် ဥပဒေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဥပဒနေဲ့ဆိုရငျ မုဒိမျးကငြ့်ပါတယျလို့ လိမျလညျစှဲဆိုလို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီဥပဒမေှာ မိနျးမက လကျခံရငျ ” Yes ” ဆိုတာနဲ့ ဆကျဆံခှင့်ရှိပွီး ပွဈမှု မမွောကျပါဘူး။ ထူးဆနျးစှာပဲ အိမျထောငျရှိ အမျိုးသားတှကေ ဒီဥပဒကေို သဘောမကကြွပါဘူး။ သူတို့ဇနီးသညျ မဆကျဆံခငျြမခွငျး သူတို့ ဆကျဆံလို့ မရလို့ပါ။
အဲဒီ ဥပဒကေ ရှငျးရှငျးလေးပါပဲ။ သငျနဲ့ ဆကျဆံမယ့် မိနျးမက သင့်ကို ကိုယျနဲ့ ဖွဈစေ နှုတျနဲ့ဖွဈစေ သငျနဲ့ ဆကျဆံခငျြတယျလို့ ပွောပါသလား။ လုပျလိုကျပါတော့။ တကယျလို့ မပွောဘူးလို့ သံသယရှိရငျ မလုပျပါနဲ့။ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှု ကျူးလှနျရာ ရောကျတဲ့အမွငျ ဇနီးမယား ဆိုရငျလဲ သူတို့ကို အလေးမထားရာ ကဩှားမှာမို့ပါ။
စာအုပျကွီးအတိုငျးဆိုရငျတော့ သူမ ” Yes ” မပွောမခွငျး ဘယျ လိငျအင်ျဂါကိုမှ မထိသင့်ပါဘူး။ သငျ အတိအကဩိခငျြရငျတော့ ဥပဒကေ သူမ သငျနဲ့ ဆကျဆံခငျြကွောငျး လက်ခဏာတှကေို ဒီလို ဖှင့်ဆိုထားပါတယျ။
၁. သင့်ရဲ့ ပါတနာက သငျနဲ့ ဆကျဆံခငျြတယျလို့ ပွောလာရငျ
၂. သငျက သင့်ပါတနာကို သငျနဲ့ ဆကျဆံခငျြလားလို့ မေးလိုကျလို့ သူက ” Yes ” ဖွရေငျ
၃. သငျ သင့်ပါတနာကို နမျးလို့ သူက ပွနျနမျးရငျ
၄. သငျက သူမတို့ကို ထိတှေ့တို့ထိလိုကျလို့ သူက သင့်ကို ပွနျထိတို့ရငျ၊ သူမ စိတျပါလကျပါနဲ့ လုပျတာ ဖွသျပွီး ဘာခွိမျးချောကျမှုမှ ခံမထားရဘူးဆိုရငျ
၅. သင့်ပါတနာက စိတျကွှစတေဲ့ ညညျးသံလေးတှေ လုပျရငျ
၆. သင့်ပါတနာက သင့်မကျြလုံးတှထေဲကို ဂရုစိုကျကွငျနာမှု အပွည့်နဲ့ ကွည့်ရငျ
၇. သငျ ပွနျစဉျးစားကွည့်လို့ သူမတို့ကို သငျနဲ့ ဆကျဆံဖို့ လိမျလညျလှည့်ဖျားမှု၊ ခွိမျးခွောကျမှု၊ ဖိအားပေးမှု ဘာတဈခုမှ မလုပျခဲ့ရငျ
၈. ဆေးတှ၊ေ အရကျတှနေဲ့ လူမှနျးမသိအောငျ မူးမနရေငျ
၉. သငျက ထိတှေ့တဲ့အခါ သူမက ကိုယျနဲ့ ဖွဈစ၊ေ နှုတျနဲ့ ဖွဈစေ မရုနျးကနျရငျ၊ သင့်ကို ကွောကျတဲ့ အကွည့်နဲ့ မကွည့်ရငျ၊ အော်ဖို့ မကွိုးစားရငျ၊ မငိုရငျ
ဒီအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီရငျ သင့်ကို မုဒိမျးမှုနဲ့ စှဲခကျြတငျလို့ မရပါဘူး။ မှတျစရာ ရှိတာက သူမက နမျးရုံနဲ့ သငျက ပွနျနမျးလို့ပဲ ရမှာပါ။ တခွားကိစ်စတှေ မရပါဘူး။
Previous: အင္တာနက္မွာအေျဖရွာမေတြ႔ႏိုင္မယ့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္း(၅)ခု
Next: အရည္အခ်င္းရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ခ်စ္ခြင့္ရဖို႔ သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား